“Izany no Lovan’ny Mpanompon’i Jehovah.”—Isaia 54:17
Fitoriana eo amin’ny fiantsonan’ny fitaovam-pitaterana manokana any Khoulo
NAZOTO nitory foana ny mpanompon’i Jehovah teto Géorgie, ka notahiny ny asa mafy nataon’izy ireo. Saika ny faritra rehetra eto àry no efa nitoriana ny vaovao tsara.
Mpitory miomana hitory any Ouchgouli, any amin’ny 2 200 metatra eo ho eo ambonin’ny haabon’ny ranomasina
Tato ho ato anefa, dia niezaka nitory bebe kokoa tany amin’ny faritany tsy voasa matetika ireo mpitory sy mpisava lalana be zotom-po. Mitokana ny tanàna sasany any amin’ireo faritra be tendrombohitra, ka tsy maintsy mitondra fiara tsy mataho-dalana na mandeha fitaovam-pitaterana manokana izy ireo vao tonga any.
Mpitory any amin’ny faritr’i Svanétie
Mandefa ny lisitr’ireo faritany tsy misy tompony any amin’ny fiangonana rehetra ny sampan’i Géorgie isan-taona, nanomboka tamin’ny 2009. Maro no nahafoy zavatra be mba hitoriana any amin’ireny faritany ireny.
Ana sy Temuri Bliadze
Mbola mpivady vao i Temuri sy Ana Bliadze rehefa nahalala hoe tsy ampy mpitory tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Adjarie. Vao avy nividy tany hanaovana trano izy ireo tamin’izay. Hitany anefa hoe afaka nampitombo ny fanompoany izy ireo.
Nijanona herinandro tany amin’ny faritr’i Adjarie aloha ry zareo. Hoy i Temuri: “Nandeha an-tongotra lavitra ireo mpitory rehefa ho any amin’ireo tanàna kely. Nanana fiara lehibe tsy mataho-dalana izahay, ka tonga dia nieritreritra aho hoe tena ilainay any ilay izy.”
Hoy koa i Ana: “Tsy mora taminay ilay nifindra, satria niraiki-po be tamin’ny fiangonana sy ny fianakavianay izahay. Nitahy anay anefa i Jehovah.” Efa telo taona mahery izao izy mivady no manampy antoko-mpitory ao Qéda, tanàna iray ao amin’ny faritr’i Adjarie.
Mpisava lalana tia karokaroka
Tena nampandroso ny asa fitoriana tany amin’ny faritany mitokana ireo mpisava lalana manokana tsy maharitra. Maro no nijanona tao amin’ny toerana nanendrena azy mba hanampy an’ireo nampianariny Baiboly, na dia efa tsy mpisava lalana manokana intsony aza.
Voatendry tao amin’ny tanàna tsara tarehy atao hoe Manglisi ny mpisava lalana roa vavy samy antsoina hoe Khatuna. Tsy nisy Vavolombelona nipetraka tao, nefa tena nahomby ny fanompoan’izy ireo. Sivy ny olona nampianariny Baiboly ny volana voalohany. Lasa 12 izany ny volana faharoa, 15 ny fahatelo, ary 18 ny fahefatra. Mbola te hanampy an’ireo mpianatra Baiboly izy ireo, ka nijanona tao Manglisi.
Nila tia karokaroka izy ireo, mba hahafahany mamelon-tena. Mampahalaza an’i Manglisi ny kaonfitiora voan-kesika. Tena tian’ny vahiny izy io satria mahasalama, hono. Nanangona voan-kesika àry aloha izy roa vavy mba hanaovana an’ilay kaonfitiora, ary nivarotra an’ilay izy teny an-tsena. Tsy nampoizin-dry zareo anefa taorian’izay hoe hahita fomba hafa hivelomana izy ireo.
Nomen’ny vehivavy iray mpianatr’izy ireo akohokely be dia be ry zareo indray andro. Nanatody tany ananonanona tany, hono, ny reniakohony iray, dia nentin’izy io nody ny zanany rehefa foy. Tian’ilay vehivavy homena azy ireo àry ireo akohokely ireo. Nahay niompy akoho ny iray tamin’izy roa vavy, ka nanapa-kevitra izy ireo hoe izay indray no hivelomany.
Hoy ny iray tamin’ireo anabavy: “Nampian’i Jehovah sy ny mpiara-manompo ary ireo mpianatra Baiboly izahay, ka afaka nijanona tao Manglisi nandritra ny dimy taona.” Misy antoko-mpitory mazoto any izao.
Khatuna Kharebashvili sy Khatuna Tsulaia any Manglisi
Mpisava lalana mitory amin’ny teny vahiny
Lasa be dia be ny vahiny tonga teto Géorgie tato ho ato. Hitan’ny mpisava lalana maro àry hoe nisy endri-mpanompoana vaovao nisokatra. Nanomboka nianatra teny vahiny izy ireo, toy ny teny anglisy, arabo, azerbaijaney, persianina, sinoa, ary tiorka.
Mpisava lalana maro no nifindra tany amin’ny antoko-mpitory na fiangonana miteny vahiny. Ny hafa kosa nanitatra faritany tany an-tany hafa. Mbola tanora i Gela sy Giorgi tamin’izy ireo nifindra tao amin’ny firenena iray teo akaiky teo. Hoy i Giorgi: “Te hanome ny tsara indrindra ho an’i Jehovah izahay. Hitanay hoe ny nifindra tany no fomba tsara hanaovana an’izany.”
Hoy i Gela: “Betsaka ny zavatra nianarako tany amin’io faritany io, tamin’izaho anti-panahy tany. Tena mahafaly ny hoe ampiasain’i Jehovah hanampy an’ireo ‘ondrikeliny!’”—Jaona 21:17.
Hoy koa i Giorgi: “Be dia be ny olana, nefa ny fanompoana no nifantohanay ka tsy niova hevitra izahay. Nanao izay tokony ho nataonay fotsiny izahay.”
Nanompo tany Torkia nandritra ny taona vitsivitsy ny rahalahy iray antsoina koa hoe Gela. Hoy izy: “Tsy dia nahita fifaliana aho tamin’ny voalohany, satria sarotra be ny fiteny teo an-toerana. Lasa faly foana anefa aho rehefa haiko ny niresaka tamin’ireo rahalahy sy anabavy ary ny olona teny amin’ny faritany.”
Efa folo taona mahery i Nino no mpisava lalana tao Istanbul, any Torkia. Hoy izy: “Ny ampitson’ny nifindrako tany aho dia efa nahita hoe nanohana ahy i Jehovah. Saika isan’andro ianao no miaina zavatra mahafinaritra hoatran’ireny ao amin’ny Diary ireny, rehefa manao mpisava lalana any an-tany hafa.”